विवाहको व्यवस्थापनका लागि के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? - विवाह - प्रकाशितः माघ १२, २०७३ - नारी
नीता पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक, वेलकम वेडिङ इभेन्ट
विवाहको व्यवस्थापनका लागि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । छोराछोरीको विवाहमा स–साना कुरा छुटिरहेका हुन्छन् । त्यसमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । इन्गेजमेन्टदेखि विवाहसम्मको पूरै प्याकेजमा धेरै कुरा आवश्यक हुन्छन् । स्वयंवरको माला, निम्ता, पान, साइपाटाजस्ता सबै कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले सजग रहनु आवश्यक छ ।
वेडिङ म्यानेजमेन्टमा के–कस्ता सुविधा उपलब्ध हुन्छन् ?
यहाँ विवाहका लागि पूर्ण प्याकेज उपलब्ध हुन्छ । यहाँ इन्गेजमेन्ट, मेहन्दीदेखि पार्टीसम्मका पूरै प्याकेज, जन्तीको स्वागत, गाडी, बग्गी, बाजा, गेस्टको तयारी, हनिमुन प्याकेजसम्मको सुविधा छ । हामी ग्राहकको आवश्यकतानुसार सेवा प्रदान गर्छौं ।
केटी पक्षको विवाहमा जन्तीको स्वागत फूलमाला दिएर हामी आफै पनि गर्छौं । एउटा विवाहमा बेहुलालाई लिन सेतो घोडी चाहिएको थियो, त्यो पनि हामीले उपलब्ध गराएका थियौं । यस्तै कतिपय विवाहमा केटी पक्षको चाहनाबमोजिम बेहुलीका लागि हामीले डोलीको व्यवस्था पनि गरेका छौं ।
यसरी विवाह गर्नुको फाइदा ?
टेन्सन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले बेहोर्छ ।यो कत्तिको महँगो छ ?
त्यति महँगो छैन । घरमा लाग्ने खर्चजस्तै पर्छ । विवाहको प्याकेज पूर्ण प्याकेज हो–होइन, आगन्तुकहरूको संख्या, गरिने व्यवस्था आदि हेरेर नै मूल्य निर्धारण हुन्छ ।